डा. पाण्डे भन्छन्- नेपालमा कोरोनाले धेरैको मृत्यु हुँदैन, रोगलाई जित्न सक्ने १२ कारण यस्ता छन् ! पुरा पढ्नुहोस्... -
पुरा हेर्नुहोस्… लामो समय यौ’नस’म्पर्क राख्न के गर्ने ?
लामो समय यौ’नस’म्पर्क राख्न के गर्ने ? पुरा हेर्नुहोस्…
← कक्षा कोठामै हेड सरकारको मिससँग ‘लाजमर्दो मस्ती’, भिडियो बन्यो भाइरल (भिडियो सहित)
याै’न कुण्ठामा रुमलिएर बाँच्नेहरुका लागि ! अवस्य पढ्नुहाेस् →
यौ’न उ’त्तेज’नामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ । किन्सेले गरेको